အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂ဝ၁၉) - Citizen of Burma Award
You are here: Home / Announcement / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂ဝ၁၉)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂ဝ၁၉)
နေ့စွဲ – ၂ဝ၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၄ ) ရက်
မြန်မာပြည်တွင်း၌လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုစွမ်းစွမ်းတမံကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေသူများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား မိသားစုများက ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူ ဝမ်းသာပါကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသသော ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဆုဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်မှ စတင်ကာ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
၂ဝ၁၉ ခု ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု အတွက်…
မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်လျက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့အတွက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံကာ စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်နေသော၊ ကျယ်ပြန့်ထိရောက်အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သော၊ လူ့ဘောင်လောက နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် စံပြဖြစ်စေမည့်၊ လူချွန်လူမွန်များကို အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းဖြင့် ဂုဏ်ပြုနိုင်ပါသည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ်လ( ၄ ) ရက် တနင်္လာနေ့ အထိ လက်ခံနေ ပြီဖြစ်ပါသည်။
အမည်စာရင်းတင်သွင်းသည့်ပုံစံကို အရင်ဆုံး လေ့လာရပါမည်။
အမည်စာရင်းတင်သွင်းမည့်သူအကြောင်း သင်သိရှိသမျှအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံနိုင်သမျှ ပြည့်စုံအောင် အချိန်ယူဖြည့်စွက်ပါ။
သင်မျှဝေပေးသော ခံစားချက်တို့မှာ အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသူအတွက် သင်၏ဂုဏ်ပြုခြင်းပင်ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွနု်ပ်တို့ကလည်း သင်ရေးသားတင်သွင်းသော ဂုဏ်ပြုခြင်းကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ လေးနက်စွာ ဖတ်ရှုလေ့လာ သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆင့်ပွားဝေမျှ ဂုဏ်ပြု တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လိုအပ်သောအချက်အလက်များဖြင့် ပြည့်စုံသည့် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းများအတွက် သင့်အီးမေးလ်ကို ဆက်သွယ်လျက် ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိပါကြောင်း အတည်ပြု ပြန်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
တဦးချင်းဖြစ်စေ၊ အသင်းအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်း လို့ရ ပါတယ်။
အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံအောင် စုံစမ်းဖြည့်စွက်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ဘယ်လိုမှ မသိနိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဂုဏ်ပြုပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အနေနဲ့ လေ့လာ၊ ဆက်သွယ်၊ စုံစမ်းသွားမှာ ဖြစ်ပေမယ့် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၃။ Online အမည်စာရင်းဘယ်မှာတင်သွင်းရမှာလဲ ?
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုအတွက် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ( ၄ ) ရက်ထိ
လက်ခံနေပြီဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ လင့်ကိုနှိပ်၍
ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ခြေက send (ပေးပို့ပါ) ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
မရပါ။ မြန်ဆန်ထိရောက်သည့် အွန်လိုင်း စနစ်ဖြင့်သာ ပို့ပေးပါ။
လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များနဲ့ ပြည့်စုံတယ်၊ ရွေးချယ်ရေးမူဝါဒများနဲ့လည်း ကိုက်ညီ တယ်ဆိုရင်တော့
ငြင်းပယ်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်များကလည်း မပြည့်စုံ၊ ရွေးချယ်ရေး မူဝါဒ များနဲ့
လည်း ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ အဲဒီအမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။
၆။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂုဏ်ပြုပွဲတက်ရောက်ခွင့်ကို ဘယ်လိုရယူရပါမလဲ?
February 5, 2019January 27, 20201
By coba_adminIn Announcement, Archive-2019
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများ၏ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂ /၂ဝ၁၉ )လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချီးမြှင့်အပ်နှင်းထားသော ဆုတံဆိပ်များ ရုပ်သိမ်းနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားကြေညာချက် ကြေညာချက်အမှတ် ၆/၂ဝ၁၈